Musharrax Jebiye oo $20,000 ugu deeqay horumarinta degmada Dangorayo (Sawiro) – Radio Daljir
Noofember 25, 2018 7:42 g 0
Musharraxa xilka Madaxwaynaha Puntland ee sannadka 2019, Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye iyo wafdi ballaaran oo uu horkacayo ayaa si mug weyn maanta loogu soo dhoweeyey degmada Dangorayo ee gobolka Nugaal.
Kumannaan dadwayne ah oo ku dhawaaqayey hal-ku-dhigyo ay kamid yihiin “Annagu Jebiyaanu Nahay, kulligeen Jebiyaanu nahay”, kuwaas oo ruxayey callamo iyo caleemo qoyan ayaa musharraxa kusoo dhoweeyey bartamaha degmada Dangorayo.
Musharraxa ayaa intaas kaddib loo soo gelbiyey Dugsiga Sare ee Kalyixeed, halkaasoo uu bulshada kul hadlay, isagoo ugu horrayn ka mahadceliyey sida qiimaha badan ee isaga iyo wafdigiisa loo soo dhoweeyey.
Injineer Maxamuud Khaliif wuxuu sheegay in degmada Dangorayo tahay degmo muhiim ah oo dhacda goob istaraatiiji ah, ayna mudan tahay in baahiyaheeda si dhaqso ah looga jawaabo, xil gaar ahna layska saaro.
Taas isagoo ka jawaabaya, Musharrax Maxamuud Khaliif Xasan Jebiye wuxuu degmada Dangorayo ugu deeqay $20,000 (labaatan kun oo doollar), lacagtaas oo lagu bixin doono mashaariicda dhanka horumarinta ee degmada Dangorayo.
Musharax Madaxweyne Puntland Janaraal Siciid dheere oo Gaalkacyo gaaray (dhegayso)